Naya Post Nepal | पललाई हिरासतमा पुराउने पिडित गायिकालाइ मध्यरातमा गरेको यस्तो रहेछ त्यो म्यासेज…
पललाई हिरासतमा पुराउने पिडित गायिकालाइ मध्यरातमा गरेको यस्तो रहेछ त्यो म्यासेज…
काठमाडौं / युट्युबर फर्किएपछि दमौलीमा प्रहरी कार्यालयको पारिपट्टि रहेको न्यु मार्फाली होटल एन्ड लज सुनसानजस्तै छ। प्रहरी कार्यालयबाहिर ब’ला’त्का’र आ’रोपि’तको पक्षमा नाराबाजी गर्ने कथित अभियन्ता छैनन्।
उनी थुनिएदेखि दमौलीमा भीड जम्मा भयो। काठमाडौंदेखि आएका युट्युबर र अभियन्ता बास बस्दा प्रहरी कार्यालयवरपरका होटल र रेस्टुरेन्टले ४–५ दिन राम्रै व्यापार गरे। बिहीबार उनीहरू फर्किएपछि भने प्रहरी कार्यालयवरपर सुनसान देखियो।
पीडित नाबालिकाले शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिइन्। उनले जाहेरीमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई बल पुग्ने गरी बयान दिएको बताईएको छ। उनका अनुसार पीडित आफ्नो बयानमा अडिग छिन्। कार्यालयले अन्य साक्षीको बयान लिइरहेको छ। पीडितका तर्फबाट पूर्वी नवलपुर प्रहरी कार्यालयमा पनि शा;हविरु;द्ध कर’णीको उजुरी परेकाले त्यहाँ पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान हुनेछ।
कलाकार दुर्गेश थापा र सम्राट चौलागाईंले बुधबार दमौली आएर पीडितकै पक्षमा बयान दिइसकेका छन्। प्रहरीले हिरासतमा रहेका शाहसँग बयान लिए पनि उनले आरोप स्वीकार गरिसकेका छैनन्। उनले म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा पीडितसँग एउटै घरमा बसे पनि शा’री’रि’क स’म्प’र्क नभएको बयान दिएका छन्। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा भने नाबालिकाको क’न्या’जा’ली च्या’ति’ए’को प्रतिवेदन आइसकेको छ।
नाबालिग (१८ वर्षमुनिको) गायिकालाई कर णी गरेको अभियोगमा अभिनेता पल शाह हिरासतमा पुगेको घटना अहिले चर्चामा छ। यसले नेपाली समाजमा ब’ला’त्का’रबारे बहस ती’व्र पारेको छ।
योसँगै ब’ला’त्का’रस’म्बन्धी कानुनमा कस्तो सजायको व्यवस्था छ भन्ने कुरामा पनि यतिबेला सबैको ध्यान तानिएको छ। सम्भवतः पल प्रकरणले धेरैलाई थाहा नभएको ब’ला’त्का’र’को कानुनी परिभाषा जानकारी भइरहेको छ।
त्यसो त पल स्वयंले आफूविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा ब’ला’त्का’र अभियोगको उजुरी परेको केही दिनपछि फेसबुकमार्फत आफूलाई फसाउन षडयन्त्र गरिएको अडिओ ‘प्रमाण’ सार्वजनिक गरे। जुन अडिओमा उनीविरुद्ध ‘पीडित’लाई आफ्नै साथीभाइले ‘उचालेको’ कुराहरू सुनिन्छ।
यी ‘प्रमाण’ले अर्थात् पलले शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध नै गरेको भए पनि ‘सहमतिमै भएको’ पुष्टि भयो भने चाहिँ उनी कानुनी सजायबाट बच्छन्?
कानुन भन्छ– कुनै हालतमा ब’च्दैनन्। किनभने कानुनमा प्रस्टसँग लेखिएको छ– १८ वर्षभन्दा कम उमेरकासँग शा’री”रि’क सम्बन्ध राख्नु आफैंमा ब’ला’त्का’र हो। अर्थात् उनकै राजीखुसीमा स’म्बन्ध ग’रिए पनि त्यो कानुनको दायरामा पुगेपछि ब’ला’त्का’र ठहरिन्छ। यसमा कुनै ‘प्रमाण’ले काम गर्दैन।
यसैले कानुनी रूपमा सर्सती हेर्दा पल शाह र उजुरीकर्ता गायिकाबीच शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध भएको पुष्टि भएका खण्डमा अभिनेता पल कानुनी कारबाहीबाट जोगिने कुनै बाटो देखिँदैन।
त्यसो भए अब उनी सजायबाट बच्ने कुनै उपाय नै छैन त?
यस्तो ठोकुवा गर्न पनि मिल्दैन। किनकि अहिले उनीविरुद्ध आरोप मात्र लागेको हो। त्यो आरोप अदालतले कसुरका रूपमा प्रमाणित नगर्दासम्म उनी ‘ब’ला’त्का’री’ ठहरिँदैनन्। यसर्थ अनुसन्धानका क्रममा पल शाहले ती किशोरीसँग यौ’न स’म्प’र्क गरेका रहेनछन् भने उनी कारबाहीबाट बच्ने सम्भावना हुन सक्छ।
अर्काे कुरा पीडित किशोरी नाबालिग अर्थात् १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी होइनन् भन्ने प्रमाण पेस भयो भने अनि उनीसँग सहमतिमै सम्बन्ध गरिएको पुष्टि भयो भने अभिनेता पल कानुनी कारबाहीबाट जोगिन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
सजायबाट बच्ने अन्तिम बाटो भनेको पीडितले अदालतमा आफ्नो बयान बदलिन् भने।
तर घटना भएको र पछि विभिन्न प्रभावमा परेर पीडितलाई बयान बदल्न मन लाग्यो भने पनि निकै अप्ठेरो अवस्था छ। किनभने यस्तो मुद्दामा बयान फेर्दा झुटो उजुरी गरेको भन्दै पीडितलाई नै कारबाही हुन सक्छ।
कि पल शाहलाई अनुकूल हुनेगरी अहिलेको ब’ला’त्का’रसम्बन्धी कानुन नै संशोधन गरिनुपर्छ। अन्यथा जुन अभियोगमा उनी समातिएका छन्, त्यसबाट उम्किने सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ। यद्यपि यसको अन्तिम किनारा भने अनुसन्धान र अदालतले नै लगाउनेछन्।
अधिवक्ता राधिका खतिवडाका अनुसार ब’ला’त्का’र घटनामा प्रत्यक्षदर्शी हुँदैनन्। भिडियो प्रमाण पनि हुँदैन। नाबालिकाले जाहेरीमा समर्थन गर्ने गरी बयान गरिसकेपछि अदालतमा पुगेर त्यसैलाई निरन्तरता दिइन् भने उनी नै यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हुने उनले बताइन्।
‘ब’ला’त्का’रस’म्ब’न्धी कानुन आएपछि सर्वोच्चमा ब’ला’त्का’रको मुद्दा लाखौं चले होलान्, कुनै पनि मुद्दामा अदालतले भिडियो वा प्रत्यक्षदर्शी चाहिन्छ भनेर खोजेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्वयं पीडितको जाहेरी नै यसको महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। जाहेरीलाई समर्थन हुने गरी घटनापूर्वका प्रतिवादी र पीडितको क्रियाकलाप, घटनापश्चात्का पीडित र प्रतिवादीका समाजमा भएका क्रियाकलापलाई नै विश्लेषण गरिन्छ।’
यो घटनामा मध्यराति १२ बजे एसएमएस गरेर कसैको कोठामा परिपक्व भएको कोही पुरुष आउँछु भन्नु नै महत्त्वपूर्ण प्रमाण भएको उनले बताइन्। प्रहरीले सार्वजनिक भएको एक अडियोलाई पनि प्रमाणका रूपमा पेस गर्ने भएको छ। उक्त अडियोमा शाहले भनेका छन्, ‘यदि उनी प्रेग्नेन्ट भएको भए समस्या हुन्थ्यो, बच्चा भएको भए स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो। गर्लफ्रेन्ड–ब्वाइफ्रेन्डबीच अन्डरस्ट्यान्डिङमा केही भयो होला। यति सेफ हिसाबले हुँदा पनि लास्टमा बिहे नै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। हामी जिन्दगीभरि सँगै हुन्छौं। म सधैं तिमीसँग बोल्छु, रिप्लाइ गर्छु भइहाल्यो नि।’ – न्युज ७१ डेल्लीबाट
२०७८ फाल्गुन २२, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 10369 Views